အမျိုးအစား: လူမှုမီဒီယာပို့စ်များ | Entprima ထုတ်ဝေခြင်း - ဂီတနှင့် အခြားအရာများ
Horst Grabosch သီချင်းစာအုပ်
Earth Care ကွန်ယက်
အားလုံးခေါင်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောပို့စ်များကို Entprima သူတို့လူမှုမီဒီယာလိုင်းများပေါ်တွင်၎င်းတို့၏ဇာစ်မြစ်ရှိသည်။
သြဂုတ် 28, 2021
ဂီတတွင်စနစ်တကျအသံ၊ ရစ်သမ်နှင့်ရွေးချယ်နိုင်သောဘာသာစကားတို့ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရှင်းသောမူဘောင်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အန္တရာယ်များကိုရိုးရှင်းစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားကိုလျှော့ချသည်။
သြဂုတ် 5, 2021
Algorithms နှင့် Pigeonholes
ဇူလိုင် 20, 2021
လူ ဦး ရေအလွန်များခြင်းနှင့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအသွင်ကူးပြောင်းမှု
ဇူလိုင် 5, 2021
တွက်ချက်မှုများအရကျွန်ုပ်တို့သည်လူ ဦး ရေ၏တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအထွတ်အထိပ်သို့ ဦး တည်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဇူလိုင် 2, 2021
ဇွန် 25, 2021
ဇွန် 11, 2021
လူများစုမျှော်လင့်ချက်များကို mainstream ဟုလည်းခေါ်သည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုအမြဲမပြတ်အစာကျွေးခြင်းသည် stagnation ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး staggation သည်သေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
မေလ 25, 2021
စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းမရှိစေရန်မျှော်လင့်ချက်ပူဖောင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးလိုကြသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင်ဟာကောင်းကျိုးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးစိတ်သဘောထားတူသူများနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးနေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ အချို့ကဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် 16 နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သဘောတူညီချက်ရယူလိုပါက၊ ခွင့်ပြုချက်အတွက် သင့်တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူများကို တောင်းဆိုရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် cookies နှင့် အခြားနည်းပညာများကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် ဤဝဘ်ဆိုက်နှင့် သင့်အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးသော်လည်း အချို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ထားနိုင်သည် (ဥပမာ IP လိပ်စာများ)၊ ဥပမာ- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ထားသော ကြော်ငြာများနှင့် အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာနှင့် အကြောင်းအရာတိုင်းတာခြင်းအတွက်။ သင့်ဒေတာအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၌ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ. အောက်တွင် သင့်ရွေးချယ်မှုကို အချိန်မရွေး ရုပ်သိမ်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ချက်များ.
privacy preference ကို
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်
တစ် ဦး ချင်းသီးသန့်လုံခြုံရေး ဦး စားပေး
ကွတ်ကီးအသေးစိတ် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ နှိပ်ရာ
အကယ်၍ သင်သည် 16 နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သဘောတူညီချက်ရယူလိုပါက၊ ခွင့်ပြုချက်အတွက် သင့်တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူများကို တောင်းဆိုရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် cookies နှင့် အခြားနည်းပညာများကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် ဤဝဘ်ဆိုက်နှင့် သင့်အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးသော်လည်း အချို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ထားနိုင်သည် (ဥပမာ IP လိပ်စာများ)၊ ဥပမာ- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ထားသော ကြော်ငြာများနှင့် အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာနှင့် အကြောင်းအရာတိုင်းတာခြင်းအတွက်။ သင့်ဒေတာအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၌ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ. အောက်တွင် သင့်ရွေးချယ်မှုကို အချိန်မရွေး ရုပ်သိမ်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ချက်များ. ဤနေရာတွင်သင်အသုံးပြုသော cookies အားလုံး၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သင်သည်အမျိုးအစားတစ်ခုလုံးကိုသင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုပေးသည်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြသပြီးအချို့သော cookies များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
အားလုံးကိုလက်ခံပါ ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကွတ်ကီးများသည်အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖွင့်ပေးပြီး ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုအတွက်လိုအပ်သည်။
Borlabs Cookie ၏ Cookie Box တွင်ရွေးချယ်ထားသော visitors ည့်သည် ဦး စားပေးများကိုသိမ်းဆည်းသည်။
စာရင်းအင်း cookies များကိုသတင်းအချက်အလက်များကိုအမည်ဝှက်ဖြင့်စုဆောင်းသည်။ ဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ visitors ည့်သည်များကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။
ဂူဂဲလ်မှ cookie သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်သရုပ်ခွဲများအတွက်အသုံးပြုသည်။ the ည့်သည်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုစာရင်းအင်းအချက်အလက်များထုတ်ပေးသည်။
Facebook မှာ Pixel
Facebook မှ Cookie သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ကြော်ငြာပစ်မှတ်နှင့်ကြော်ငြာတိုင်းတာခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသည်။
_fbp, လုပ်ရပ်, c_user, datr, fr, m_pixel_ration, pl, ရှိနေခြင်း, sb, လှည့်ဖျား, wd, xs
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ / ၁ နှစ်
ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းများနှင့်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများမှအကြောင်းအရာကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်။ External Media cookies များကိုလက်ခံပါကထိုအကြောင်းအရာများအားလက်လှမ်းမီရန်လက်စွဲသဘောတူညီမှုကိုမလိုအပ်တော့ပါ။
Borlabs cookie ကိုစွမ်းအားဖြင့်